Faa faahino kasoo baxaya Dagaalo iyo Duqeymo culus oo ka dhacay Muqdisho « AYAAMO TV
Faa faahino kasoo baxaya Dagaalo iyo Duqeymo culus oo ka dhacay Muqdisho
597 Views Date February 20th, 2014 time 11:47 am
Waxaa Xalay Dagaal aad u culus oo u dhaxeeyay Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Ciidamo katirsan Dowlada iyo AMISOM uu ka dhacay Xaafado kamid ah Degmada Hliwaa ee Gobolka Banaadir.
Dagaalka ayaa ka dhacay Fariisin Ciidamada AMISOM iyo kuwa Dowlada kuleeyihiin Warshadii Barfuunka oo kutaal agagaarka Isgooska SOS ,waxaana fariisinkaasi weerar qorsheesan kusoo qaadeen dagaalyahano aad u hubeesan oo katirsan Al-Shabaab.
Labada Dhinac waxaa dhax maray dagaal aad u culus oo socday ku dhawaad saacad ,kaa oo la isku adeegsanayay hubka nuucyadiisa kala duwan, Hugunka Madaafiicda iyo Rasaasta labada dhinac is dhaafsanayeen ayaa aad looga maqlayay inta badan Magaalada Muqdisho.
Ciidamada AMISOM ayaa sidoo kale Madaafiic waxa ay ku garaaceen Xaafado katirsan Degmada Hiliwaa , Madaafiicda ay AMISOM garaacday ayaa ku dhacday Xaafado katirsan Suuqa Xoolaha iyo SOS ,Shacabka ku dhaqan Degmada Hiliwaa ayaa xalay waxa ay u aheed habeen cabsi iyo wal wal badan.
Inta la ogyahay Duqeymaha ay AMISOM geesteen iyo Dagaalka dhacay waxaa ku dhintay Hal qof halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 7-qof oo u badnaa dad Shacab ah , lama oga qasaaraha kala gaaray dhinacyada dagaalamay.
Shacabka ku dhaqan Xaafado katirsan Degmada Hiliwaa ayaa bilaabay in ay ka barakacaan guryahooda kadib markii ay u adkeesan waayeen dagaalada soo noq noqda ee degmadaasi ku dhax mara Dagaalyahanada Al-Shabaab iyo Ciidamada Dowlada .
Saraakiiisha Dowlada iyo kuwa AL-Shabaab ayaan wali ka hadlin dagaalkii cuslaa ee xalay ka dhacay Degmada Hiliwaa kaa oo la tilmaamay in uu ahaa mid kamid ah Dagaaladii ugu cuslaa ee Mudooyinkan Muqdisho ka dhaca.
Dagaalyahanada AL-Shabaab ayaa u muuqda kuwa kusii xoogeesanaya Degmada Hiliwaa halkaas ay maalin iyo habeenba ka geestaan weeraro toos ah iyo Dilal qprsheesan, Maamulka Dowlada ee Degmada Hiliwaa ayaana horey u shaaciyay in Degmadaasi qarka u saaran tahay in Al-Shabaab la wareegaan.